लियो क्लब अफ काठमाडौं निर्बानाको अध्यक्षमा लियो मन्दिरा थापा::kamananews
लियो क्लब अफ काठमाडौं निर्बानाको अध्यक्षमा लियो मन्दिरा थापा
३० बैशाख २०७५ काठमाडौँ। लियो क्लब अफ काठमाडौं निर्बनाको बर्ष २०१८/२०१९ को लागि मन्दिरा थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । क्लवको दोस्रो बार्षिक साधारण सभा तथा अधिबेशनले लियो मन्दिरा थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।
लियो समितिको प्रथम उपाध्यक्षमा लियो किरण लामा, द्वितीय उपाध्यक्षमा लियो प्रतिक लम्साल र तृतीय उपाध्यक्षमा लियो सम्झना प्याकुरेल निर्बाचित भएको छन । कार्यक्रम संस्थाका वर्ष २०१७/१८ अध्यक्ष लियो जगन्नाथ पोख्रेलको अध्यक्षतामा भएको थियो
नेपाली म्याराडोना मणि शाहको निधन
३१ बैशाख २०७५,काठमाडौं । नेपाली म्याराडोना उपनामले चिनिने पूर्व खेलाडी मणि शाहको निधन भएको छ । उपचारको क्रममा नर्भिक अस्तालमा सोमबार सान्झ निधन भएको महाविर क्लबका अध्यक्ष दिवाकर घलेले जानकारी दिए नेपाली टिमबाट सन्...
बम विस्फोट गराएकी २६ बर्षीय युवती पक्राउ !
३० बैशाख २०७५ ,झापाको मेचीनगरस्थित सूर्योदय यातायात प्रालिको बस ग्यारेजमा आइतबार बिहान बम विस्फोट गराएको आरोपमा मेचीनगर–८ निवासी २६ वर्षीया स्मृति रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रिजाल नेकपामा आबद्ध रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय...
चर्चमा बम विस्फोट ! कसले गरायो पुरा पढ्नुहोस
३० बैशाख २०७५, धनगढी, । धनगढी उपमहानगरपालिका–४ को माइटोलमा रहेको चर्चमा गए राति गराइएको बम विस्फोटनबाट चर्चमा भौतिक क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बम विस्फोटबाट चर्चका झ्यालमा...
३० वैशाख, २०७५ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण उपलब्धीपूर्ण र नेपालको पक्षमा भएको बताएका छन् । तीन वर्षअघि तनावपूर्ण रहेको दुई देशको सम्बन्ध अहिले नयाँ स्तरमा प्रवेश गरेको...
ओलीको राष्ट्रघातबिरुद्ध भोली बैशाख ३० गते नेपाल बन्द, संघर्षमा साथ दिन सबै राष्ट्रप्रेमीलाई विप्लवको आग्रह !
काठमाडौं – प्रधनमन्त्री केपी ओलीले अरुण तेस्रो जलबिद्युत आयोजना भारतलाई बुझाएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले त्यसको कडा शब्दमा बिरोध गरेको छ । शुक्रबार राति ओलीले अरुण तेस्रो मोदीलाई बुझाएलगत्तै शनिबार बिहानै नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द...